‘कांग्रेसलाई शेरबहादुर देउवाबाट जोगाऔं’
निशान न्युज माघ १४, 2074
प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाप्रति दया गर्ने कि माया ? सवै कांग्रेसजनलाई जस्तै मलाई पनि दोधार भैरहेको छ । देउवालाई कांग्रेस र लोकतन्त्रको शत्रु ठान्ने कि मित्र ? छुट्याउन गाहृो छ ।
कांग्रेसभित्र देउवाका जब्बर समर्थक र आलोचक छन् । समर्थकहरु स्वार्थवश मात्र बनेका छैनन् होला, न त विरोधीहरु नै पनि आधारहीन आलोचना मात्रै गर्छन् ।
देउवाले पार्टी फुटाए, प्रजातन्त्र राजालाई वुझाए । तर, पनि देउवाले शंकाको लाभ पाए र जोगिए । कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले उनलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनाए ।
अहिले निर्वाचनको माध्यमवाट देश देउवाले वामपन्थीहरुलाई सुम्पिँदै छन् । किन यो भयो ? देउवाले जवाफदेही लिने छैनन् र उनको नेतृत्वको समीक्षा पनि सबै कांग्रेसजनझै म पनि गर्न चाहन्नँ ।
देउवाको समीक्षा इतिहासले गर्छ
म यहाँ देउवा कति ठीक र कति बेठीकमा जान्न । प्रम र कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो सात दशक लामो जीवनमा जे गरे, त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्दै गर्ला । जब जब कांग्रेसको इतिहास अगाडि आउनेछ, तब तब देउवा एउटा पात्र हुनेछन् कांग्रेसको । कस्तो पात्र ? अहिले नजाउँ ।
म कांग्रेस कस्तो पार्टी थियो विगतमा र यसका कार्यकर्ताहरु कस्ता थिए त्यसमा पनि जान चाहन्न । यो कथा पनि धेरै नै भयो । कांग्रेस सत्तामा हुँदा कसरी सरवादी, सुकिला मुकिला र पैसावालाहरुले पार्टीलाई घेर्छन् र फेरि पार्टीभित्रै कार्यकर्ताहरुले अर्को संघर्ष गर्नुपर्छ भनी वीपी कोइरालाले किन भने ? यो विषयमा पनि प्रवेश गर्दिनँ । किनकि पार्टीभित्र अवसरवादीसँग संघर्ष गर्ने शक्ति र सामथ्र्य राख्ने कार्यकर्ताहरु धेरै पहिलेदेखि नै खेदिए ।
मलाई निर्वाचनपछि देउवाको नेतृत्वमा भैरहेका काम कारवाहीले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक धर्म जोगिन्छ कि जोगिँदैन यति मात्र बहस अगाडि बढाउने पिरलो भयो ।
प्रम र पार्टी सभापति ‘देउवा एण्ड कम्पनी’ जे गर्दैछन्, त्यो लोकतन्त्रसम्मत छ कि छैन ? कांग्रेसको मूल्यपद्दतिअनुरुप हो कि होइन ? यस विषयमा मात्रै अगाडिका विचार केन्दि्रत गर्नुछ ।
म कांग्रेस थिएँ, कांग्रेस रहन्छु । तर, कांग्रेस रहे न म पनि कांग्रेस हुने हो भन्ने चिन्ताले नचाहिँदो पिर ममा छ । कांग्रेस लोकतान्त्रिक संस्कार, पद्दति, प्रणाली र व्यवहारको नाम हो । तर, यही नरहँदा म कसरी कांग्रेस रहुँला ? मैले बुझेको कांग्रेस र देउवाले बुझेको कांग्रेस फरक भए । देउवा कांग्रेस कि म कांग्रेस ? मलाई समस्या भयो ।
लोकतान्त्रिक संस्कारहीन देउवा
देशमा आम निर्वाचन भएको झण्डै ६ महिनापछि सम्भवत निर्वाचित सरकार बन्ने छाँट देखिँदैछ । यस्तो किन भयो भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई सरकार बन्नै सक्तैन भनी पंण्डित वकिलहरुले भने, देउवाले माने । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भनेर भनियो ।
वृद्धभत्ताको उमेर पाँच वर्ष कान्छो गरेर देउवाले कांग्रेसको समर्थन समूह वृद्धि गरे भनी सोच्दछन् भने यो उनको अल्पवुद्धि हो
एकछिनलाई सोचौं – अहिले त देशको सबै ठाउँमा प्रदेशसभाको चुनाव भएको छ र त्यसकारण पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्भव छ । अनि ६ महिनापछि पनि प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउला । यदि दुई नम्बरमा प्रदेशसभाको चुनाव नभएको भए के सरकार नै बन्ने थिएन त कहिल्यै पनि ?
यतिमात्र होइन, भोलिका दिनमा कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रदेससभाको निर्वाचन हुन सकेन भने सरकार कहिल्यै नआउने भयो त ? अहिले यही मान्यता स्थापित भएको छ । र, भावी नेपालमा सरकार नछाड्न निरन्तर कुनै प्रदेशको एक ठाउँमा गडबडी चलेर वा चलाएर सरकार ६ महिना मात्रै होइन, ६ वर्ष पनि बन्न नसक्ने भएमा दोष कसलाई ? अहिले यस्तै मान्यता स्थापित भयो ।
अहिले देउवा सरकारले सबै निर्वाचन परिणाम नआएको बहानामा आफ्नो सत्ता लम्ब्याए पाँच महिनासम्म । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार केही समय लम्बिँदा कांग्रेसजन खुशी नै भए होलान् । भावी दिनमा वामपंथीहरुको सरकार हुन्छ । अनि अनुमान गरौं पाँच वर्षपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भो, प्रतिनिधिसभाको चुनाववाट । त्यतिखेर प्रदेशसभाको निर्वाचन नगराएर, गराएको पनि कुनै एक वा दुई ठाउँमा निरन्तर गडबडी गरेर नयाँ सरकार चयनलाई महिनौं वा वर्षौं रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
हो, अहिले लोकतान्त्रिक धर्म पालन नगर्दा अधिनायकवाद आउँछ । अनि त्यस्तो बाटो खन्ने काम कांग्रेसले गर्न सुहाँउथ्यो ? देउवाले गरे ।
सबैभन्दा दुर्भाग्य त नेपाल अलोकतान्त्रिक प्रकृयावाट अगाडि बढिरहँदा कुनै पनि संवैधानिक निकायले यसलाई सहज पार्ने पहलकदमी गरेनन् । बरु उल्टै निर्वाचन आयोगले त भावी नेपाल अधिनायकवादतर्फ जाने मार्ग पो प्रशस्त गर्‍यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतले पनि यसमा प्रष्ट्याउन जरुरी ठानेन ।
कांग्रेसको लोकतान्त्रिक धर्म र नेपालको संविधान हारिरहँदा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको मौनता पनि आश्चर्यलाग्दो छ । के देउवासँगै सबै कांग्रेसको लोकतान्त्रिक धर्म मलामी जाँदैछ ? र, पराजयको निराशामा ‘कांग्रेस पार्टी मुक्त नेपाल’ हुँदै गर्दा अर्को वैकल्पिक पार्टीले लोकतन्त्रको विगुल फुक्छ कि भनी आश गर्ने ?
वैकल्पिक राजनीति पनि रहेन
एक मनले लाग्छ, कांग्रेस पार्टी कति चाँडो देशवाट विदा लिन्छ र युवापुस्ताले यो पार्टीवाट त्राण पाउँछन् । सम्पूर्ण देशको विकास र सम्भावनाहरु यही पार्टीले दशकौंदेखि अवरुद्ध गरिरहेको शंका लाग्छ । अर्को मनले सोच्छ, के कांग्रेसको विकल्पमा अर्को लोकतान्त्रिक पार्टी आउला, जसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छ वा जोगाउनु पर्दा संघर्षमा उत्रिन सक्छ ? नेपालका वामपन्थीहरुको विकल्प कसले दिन सक्ला ? तीन दशक अगाडि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको स्वाभाविक विकल्प नेपाली कांग्रेस थियो । अब वामपन्थीको विकल्प कांग्रेस हुन सक्ला र ? चिन्ता गर्नपरेको छ ।
मलाई विवेकशील साझा पार्टीको कांग्रेससँगको सत्संग राम्रो लाग्यो । किनकि शहरिया मध्यमवर्गमा एकपटक फेरि कांग्रेसले आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर पाएको छ । विवेकशील खरानी भएको छ
अराजनीतिक युवाहरुको ‘स्पनटेनियश’ आकर्षण थियो विवेकशील साझा पार्टी । तर, शहरिया मध्यमवर्गलाई निराश पार्न उद्धेलित छ यो पार्टी भने अरु विकल्पहरु कस्ता होलान् भविष्यमा ?
इतिहास थिएन विवेकशील साझा पार्टीको । उत्सर्ग पनि थिएन । तर, उर्जा थियो केही दिन अगाडिसम्म । देश विदेशमा बस्ने युवाहरुले आफ्नो अविभावकलाई ‘हाम्रोमा होइन, राम्रो पार्टीमा’ भोट हाल्नु भनी दबाव दिए । दबाव प्रभावकारी भयो र विवेकशील सझाले सामान्य प्रयासबाट वैकल्पिक राजनीतिको बाटो पनि खोलेको थियो, सम्भावना देखाएको थियो । तर, यतिखेर यो पार्टी खरानी भएको छ । न विवेक रहृयो, न अब यो साझा हुने लक्षण छ ।
मलाई विवेकशील साझा पार्टीको कांग्रेससँगको सत्संग राम्रो लाग्यो । किनकि शहरिया मध्यमवर्गमा एकपटक फेरि कांग्रेसले आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर पाएको छ । विवेकशील खरानी भएको छ ।
धेरै दिन भैसकेको थियो, देउवालाई जनताले विपक्षको भूमिकामा हेर्न खोजेको । तर, निरंकुशताको जग बसाउन उद्धेलित उनको घेराले उनलाई निर्वाचनमा पराजय भएर पनि तत्कालै काम चलाउ हुँदै विपक्षमा बस्न सघाएन । यसवीच उनले वामपन्थी सरकारलाई भविष्यमा खुला छुट दिने अनेकन काम गरेका छन् ।
निराशामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
निर्वाचनमा पराजयपछि प्रम देउवाले गरेका निर्णयहरुले झण्डै ‘एक खरबको’ दायित्व राज्यले व्यहोर्नुपर्नेछ । म यहाँ देशमा आर्थिक संकट आउँदैछ र त्यसलाई वाम सरकारले सम्हाल्न सक्तैन भन्ने सोचवाट देउवाले यस्तो दुस्शाहशी काम गरे होलान् भनी विश्वास गर्दिनँ । तर, वृद्धभत्ताको उमेर पाँच वर्ष कान्छो गरेर देउवाले कांग्रेसको समर्थन समूह वृद्धि गरे भनी सोच्दछन् भने यो उनको अल्पवुद्धि हो ।
नेपालमा वृद्धभत्तामा “एमालेको पेटेन्ट राइट” भैसक्यो, मनमोहन अधिकारीको इमेज यसमा जोडिएको छ । पैसाको आकारले होइन ‘कार्यक्रमले’ नै यो एमालेकरण भैसकेको छ । बरु कांग्रेसको ‘गरीवसँग विश्वेश्वर’लाई जनतावीच स्थापित गराउन सकेको भए पाँचवर्ष पछि हुने निर्वाचनमा त्यसले महत्व राख्थ्यो । वृद्धको उमेर कम गर्नेजस्तो प्रतिगामी कदम चाल्नु पर्दैनथ्यो होला ।
सत्तावादी चरित्र भएको पार्टीमा लडाकूपन र जुझारुपन ल्याएर कम्युनिष्टसँग राजनीतिमा जुझ्ने काम सजिलो पक्कै छैन । यसमा नैतिक, वैचारिक र सांगठनिक तिनै तहबाट तयारी गर्नुपर्छ , देउवा यसमा फेल छन्
देशको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने ? पार्टीलाई कसरी जनतासँग जोड्ने भन्ने सामान्य ज्ञान पनि प्रम देउवामा देखिएन । वृद्धमाथिको लगानीले देश निर्माण हुन्छ कि वालवालिका र केटाकेटीमाथिको लगानीले ? केटाकेटीहरु, जो भविष्यका कणर्ाधार हुन् देशका भनी ओठे प्रशंशा गरिन्छ, तिनका लागि न समुचित शिक्षा छ, न विद्यालय छ, न शिक्षक गुणस्तरीय छन्, न पार्क र खेलमैदान छन् । केही पनि त छैन । अनि देशका युवाहरुलाई रोजगारीको फिटिक्कै कुनै व्यवस्था र प्रवन्ध छैन । एक खरबले वालवालिका र युवाहरुलाई धेरै गर्न सकिन्थ्यो । तर, युवालाई नै वृद्ध पारेर कसरी देश बन्छ प्रमज्यू ?
को छन् नेपालमा वृद्ध उमेरसम्म बाँच्ने ? अपवादवाहेक अधिकांश वृद्धहरु हुनेखाने र राम्रो परिवारका छन् । ती मध्यम वर्ग छन्, ती उच्च वर्ग छन्, ती राज्यवाट सबै सुख सुविधा प्राप्त स्पेशल नागरिक छन् ।
प्रमज्यू, एकपटक तपाई आफ्नो गाउँ डडेलधुराको रुवाखोला जानुस् । तपाईको उमेरका कति साथीहरु बाँचेका छन् ? आफैं हेर्नुहोस् । म तपाईभन्दा झण्डै डेढ दशक युवा छु, म मेरो गाउँमा आफुसँगको राजवंशी, मुसहर, चमार, सतार विरलै भेट्छु । अनि बालुबाटारमा दिनरात मडारिने तपाईका साथी सहयोगीहरुको उमेर सोध्नुहोस् । रुवाखोलामा तपाईको क्लास मेट बिरलै बाँचेका होलान् । तर, वालुवाटारमा सुट र कोटमा सजिने सबै ६५ वर्षका त होलान नि तपाई जस्तै । अपिन तपाई कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा वृद्धभत्ता हुनेखानेहरुलाई राज्यले थप पोस्ने मात्र व्यवस्था हो । यो प्रतिगामी छ । हो, वृद्धहरुको सामाजिक सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो, त्यसमा संवेदनशील हुनैपर्छ । वृद्धको मात्र होइन, सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । तर, त्यो गर्ने कसरी ? वृद्ध आवाश भवन सबै प्रदेशमा, विरामीको निशुल्क उपचार, वृद्धपार्क, पुस्तकालय अनेकन् उपाय छन् वृद्धहरुलाई ।
यी सबै गर्ने पनि समय र वैधानिक पद हुनुपर्छ । जनतावाट तिरस्कृत नेताले राज्यको ढुकुटीबाट एक खरब खर्च गर्छ भने जनसमर्थनप्राप्त भावी प्रम खड्ग ओलीका लागि भावी दिनमा के के मात्र गर्ने छुट होला ? यस्तो छुट गर्ने मान्यता स्थापित गरेर भोलिका दिनमा कांग्रेसले विपक्षीको भूमिकामा सरकारलाई नियन्त्रण र जवाफदेही के गरी बनाउला ? कुन नैतिक धरातलवाट यो कार्य सम्भव छ । यो चूक भएको छ कामचलाउ प्रमबाट । यसलाई सच्याउ देउवा ।
कार्यक्रम छाडी पैसा वितरण
प्रम देउवा आफूलाई वीपी र गिरिजाप्रसादको चेला भन्न रुचाउँछन् । वीपी कोइरालाले देउवालाई के सिकाए कुन्नि थाहा भएन । तर, म स्मरण गराउँछु । ०३६ सालको जनमत संग्रहको समय काठमाण्डौं टुँडिखेलमा आमसभा थियो ।
हामी विद्यार्थीहरु बिराटनगरबाट वीपीको आमसभा हेर्न र सुन्न काठमाडौं आएका थियौं । वीपीले टुँडिखेलमा औंलो ठड्याएर ‘भावी सरकार हाम्रो हो तसर्थ यो सरकारले कुनै पनि सेवा सुविधा बढाउन सक्तैन’ भनी तत्कालीन पञ्चायती शासनलाई थर्काउनुभएको थियो ।
तिखेर शिक्षक र पाइलटहरु तलव वृद्धिलाई लिएर हडतालमा थिए । वीपीले भावी सरकार हाम्रो हो, मेरो हो, तसर्थ अहिले संक्रमणकालमा कुनै किसिमको सेवा सुविधा वृद्धि म स्वीकार्दिनँ भनेर वीपीले थर्काएका थिए । लोकतान्त्रिक धर्म भनेको वीपीबाट कांग्रेसजनले यही सिकेको हुनुपर्छ, मैले यही सिकेको छु ।
के पैसा नभएर भूकम्प पीडितहरुको घर अहिलेसम्म निर्माण नभएको हो ? होइन । इच्छाशक्ति र राजनीतिक खिचातानीमा भूकम्प पीडितहरु पीडा भोगिरहेका छन् । देउवा यसमा दोषी छन् । उनले एकजना सीईओ त यो काम गर्न स्थिर दिन सकेनन्, अनि कसरी हुन्छ भूकम्पपीडितलाई राहत र घर ?
कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भएन
कामचलाउ प्रम देउवाले जुन ढंगले अहिले कार्य गर्दैछन् भोलिका दिनमा कांग्रेसले वामपन्थी सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सबै अवसरहरु गुमाउँदैछन् । किन देउवा यसो गर्दैछन् भन्ने कुराको जवाफ वीपीवाट नै सुनौं ।
वीपीले ‘नेपाली कांग्रेस र सरकार’ लेखमार्फत भनेका थिए- ‘हाम्रा धेरैजसो साथीहरु सरकारको मुखापेक्षी हुने बानी बसेको छ र हामीमा लडाकूपनको अभाव हुँदै गएको छ । त्यसको फलस्वरुप विरोधी पार्टीहरुलाई संगठन गर्ने मौका मिलेको छ, तिनीहरुले देशमा रहेको लडाकूपनको नेतृत्व गर्न लागिपरेका छन् । हामी भने सरकारले सबैथोक गरिदेला भन्ने आश लिएर सिंहदरबारपट्ट िमुख फर्काएर बसेका छौं ।’
सिंहदरबारले सबैथोक हिजो पनि गर्न सकेको थिएन, आज पनि सक्तैन । झन राजनीति त फिल्डमा जित्ने र हार्ने हुन्छ, देउवाले यो बुझेनन् ।
निश्चय नै कम्युनिष्टसँग जित्न वीपीले भनेझैं लडाकूपन र जुझारुपन चाहिन्छ नै । अब कांग्रेसमा लडाकूपन र जुझारुपन कसरी ल्याउने ? त्यो भनेको के हो ? देउवासँग बुझ्ने क्षमता नै छैन । सत्तावादी चरित्र भएको पार्टीमा लडाकूपन र जुझारुपन ल्याएर कम्युनिष्टसँग राजनीतिमा जुझ्ने काम सजिलो पक्कै छैन । यसमा नैतिक, वैचारिक र सांगठनिक तिनै तहबाट तयारी गर्नुपर्छ, देउवा यसमा फेल छन् ।
लडाकूपन र जुझारुपनलाई कांग्रेसले तिलाञ्जली दिएर टिकट वितरण गर्‍यो विगतमा । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा दिएको उम्मेदवारीले त कांग्रेसको श्रद्धाञ्जली नै लेख्न ‘देउवा एण्ड कम्पनी’ लागिपरेको देखिन्छ । तीन तहको निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा चेत आयो होला भनी कामना गर्नेहरुलाई देउवाले ‘म सुधि्रन तयार छैन’ भनी सन्देस दिए ।
माथि नै भनियो, देउवालाई अलोकतान्त्रिक धर्म गर्न कांग्रेसले रोक्न सकेन । थुप्रै मान्यताहरु अलोकतान्त्रिक भए, निर्वाचनमा पराजयपछि । देउवाका यी सबै कुकर्मले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकामा कांग्रेसलाई अहिले नै पराजित बनाएको छ ।
अब उत्तरदायी शासन र जनताप्रति जवाफदेही सरकारका रुपमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ला ? कांग्रेसजन टाउको निहुराएर बस्नुपर्ने छ देउवासहितको कांग्रेसमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा ।
कांग्रेस र लोकतन्त्र जोगाउनु छ भने अब देउवालाई कांग्रेसबाट फेरि निकाल्नुको विकल्प छ ?
बरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने बुद्धिजीवी हुन् । विशेष गरी कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे विश्लेषणात्मक रूपमा कलम चलाउँदै आएका छन् । अनलाइन खवरबाट साभार
मञ्चबाट चर्काे भाषण गर्दैमा जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन
गरीबको झुपडीमा अझैँ चुल्हो बलेनश्रम चल्यो सिप चल्यो पानी चलेन । माथी खरीबोटबाट बिहानै माल्दाई बे...
नेपालको दलित समुदाय संरचनागत हिसाबले राजनीतिकरूपमा राजनीतिक दल, संसदीय क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्...
‘प्रायोजित शक्ति’ बलियो बन्ने र जनमतबाट बनेको सरकार निरीह बन्ने अवस्था नआओस्
‘प्रत्येक नेपालीलाई स्वतन्त्रताको हक हुनेछ । सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक हुनेछ ।’ नेपालको संबिधान...
जरुरत ‘दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति’ विरुद्ध संघर्ष ट्रेड युनियनको
आजको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वर्तमान सामाजिक अवस्था अनुस...
सिंहदरबारभित्र हुने भ्रष्टाचारले कर्णालीलाई समेत छोडेन, टोल र गल्लीलाई छोडेन
मुलुकमा यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार रहेको छ । संघीय संसदमा सरकारको प...